नेपाल टेलिकमले एकैपटकमा ल्यायो यी २२ आकर्षक एटम अफर - Gokarna News
नेपाल टेलिकमले एकैपटकमा ल्यायो यी २२ आकर्षक एटम अफर
काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले २२ आकर्षक अटम अफर उपलब्ध गराउने भएको छ । आजैबाट लागु हुने उक्त अफर आगामी पौष २८ गते सम्म लिन सकिने छ ।
जीएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा अल टाइम डाटा प्याकेज प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत कम्पनीले उपलब्ध गराएका विभिन्न प्याकेजमा ५० प्रतिशत थप बोनस डाटा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अब थप बोनस समेत गरी अल टाइम डाटा प्याक अन्तर्गत १० रुपैयाँमा एक दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी २३ एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी २५ रुपैयाँमा सात दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ७५ एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ ।
५० रुपैयाँमा २८ दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी १५८ एमबी डाटा, १ सय रुपैयाँमा २८ दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ५१० एमबी डाटा, २०० रुपैयाँमा २८ दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी १०८८ एमबी डाटा, ३०० रुपैयाँमा २८ दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी १९१३ एमबी डाटा र ५०० रुपैयाँमा २८ दिनसम्म चौबिसै घण्टा उपभोग गर्न पाउने गरी ४५०० एमबी डाटा उपलब्ध हुनेछ ।
जीएसएम प्रिपेडरपोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा नाइट टाइम भोलुमवेस्ड डाटा प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा पनि थप ५० प्रतिशत बोनस डाटा उपलब्ध हुनेछ । थप बोनस समेत गरी नाइट टाइम भोलुम वेस्ड डाटा प्याक अन्तर्गत अब ५ रुपैयाँमा ६८ एमबी डाटा १ दिन सम्म प्रयोग गर्न सकिने छ ।
त्यसैगरी ४५ रुपैयाँमा ६३८ एमबी डाटा ७ दिन सम्म र ३०० रुपैयाँमा ७६८० एमबी डाटा २८ दिनसम्म चलाउन पाइने छ । नाइट टाइम भोलुमवेस्ड डाटा प्याक राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म चलाउन पाइने छ ।
जीएसएम–सीडीएमए प्रिपेड–पोष्टपेड मोबाइलमा अनलिमिटेड नाइट टाइम डाटा प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । अनलिमिटेड जीएसएम–सीडीएमए नाइट डाटा प्याक अन्तर्गत १५ रुपैयाँमा १ जीबी डाटा राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म चलाउन पाइने छ ।
डाटा खरिद गरेको एक दिन सम्म यसको अवधि हुनेछ । त्यसैगरी ८५ रुपैयाँमा ७ दिन सम्म र २४० रुपैयाँमा २८ दिनसम्म अनलिमिटेड १ जीबी डाटा राती १० बजे देखि विहान ६ बजे सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । उपरोक्त सवै प्याकमा १ जीबी डाटासम्म थ्रिजी/फोरजीको गतिमा चल्ने छ र त्यसपछि २५६ केबीपीएसको गतिमा अनलिमिटेड चल्ने छ ।
जीएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलका लागि अल टाइम स्ट्रिमिङ प्याक अन्तर्गत युट्युब र वाउटाइम एप्स चलाउन सकिने छ । यसमा पनि थप ५० प्रतिशत बोनस डाटा उपलब्ध हुनेछ । थप बोनस डाटा समेत गरी ११५ रुपैयाँमा १९५० एमबी डाटा भोल्युम प्राप्त हुनेछ ।
यो प्याकेज २८ दिनको अवधिसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ । त्यसैगरी ४५ रुपैयाँमा ६०० एमबी डाटा ७ दिन अवधिका लागि र १० रुपैयाँमा १५० एमबी डाटा १ दिनका लागि उपलब्ध हुनेछ ।
जीएसएम तथा सीडीएमए प्रिपेडरपोष्टपेड मोबाइलमा भ्वाइस प्याक अन्तर्गत एक दिनका लागि १० रुपैयाँमा ११ मिनेट भ्वाइस कल प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी २५ रुपैयाँमा ३० मिनेटको प्याकेज ३ दिन अवधिका लागि उपलब्ध छ ।
५० रुपैयाँमा ५ दिनका लागि ७५ मिनेट, १०० रुपैयाँमा १० दिनका लागि १९० मिनेट, २०० रुपैयाँमा २८ दिनका लागि ४०० मिनेट र ५५० रुपैयाँमा ६० दिनका लागि ११६० मिनेट कल उपलब्ध गराइएको छ । सो कल नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्रका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
जीएसएम तथा सीडीएमए प्रिपेडरपोष्टपेड मोबाइलमा नाइट टाइम भ्वाइस प्याक अन्तर्गत ५ रुपैयाँमा १ दिनसम्म ३० मिनेट, १२ रुपैयाँमा १ दिनसम्म कम्पनीकै नेटवर्कभित्र असीमित (अनलिमिटेड) समय, २५ रुपैयाँमा ७ दिनसम्म २४० मिनेट र १०० रुपैयाँमा २८ दिनसम्म ११०० मिनेट कल गर्न सकिने छ । सो प्याक राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने छ ।
कम्पनीले कर्पोरेट ग्राहकहरुका लागि कन्भज्र्ड सीयूजी (कर्पोरेट युजर ग्रुप) प्याकेज उपलब्ध गराएको छ । जीएसएम–सीडीएमएका प्रिपेड/पोष्टपेड सबैमा यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यस अन्तर्गत कम्पनीकै नेटवर्कमा जीएसएम/सीडीएमएका प्रिपेड ग्राहकले २०० स्पैयाँमा ६५ मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा १२५ एमबी डाटा चलाउन र २५ वटा एसएमएस पठाउन सक्ने छन ।
त्यसैगरी कम्पनीकै नेटवर्कमा जीएसएम–सीडीएमए पोष्टपेड प्रिपेडका ग्राहकले ४०० रुपैयाँमा १५० मिनेट भ्वाइस कल गर्न, ३०० एमबी डाटा चलाउन र ५० वटा एसएमएस पठाउन सक्ने छन । यो वाहेक ७०० रुपैयाँमा ३०० मिनेट भ्वाइस कल गर्न, ८०० एमबी डाटा चलाउन र १०० वटा एसएमएस पठाउन सकिने छ ।
१००० रुपैयाँमा ४५० मिनेट भ्वाइस कल गर्न, १५०० एमबी डाटा चलाउन र १५० वटा एसएमएस पठाउन, १३०० रुपैयाँमा ६०० मिनेट भ्वाइस कल गर्न, २१०० एमबी डाटा चलाउन र २०० वटा एसएमएस पठाउन तथा १६०० रुपैयाँमा ७५० मिनेट भ्वाइस कल गर्न, २७०० एमबी डाटा चलाउन र २५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने छ ।
यस अन्तर्गत २० स्पैयाँमा भिडिओे र टिभि प्रतिघण्टा हेर्न तथा ४०० एमबी डाटा चलाउन सकिने छ । जसमा १५ रुपैयाँको स्ट्रिमिङ र ५ रुपैयाँको वाउ टिभि हेर्न सकिने छ । त्यसैगरी ३५ स्पैयाँमा भिडियो र टिभि २ घण्टा हेर्न तथा ८०० एमबी डाटा चलाउन सकिने छ ।
जसमा २८ रुपैयाँको स्ट्रिमिङ र ७ रुपैयाँको वाउ टिभि हेर्न सकिने छ । साथै ५० स्पैयाँमा भिडियो र टिभि ३ घण्टा हेर्न तथा १२०० एमबी डाटा चलाउन सकिने छ । जसमा ४१ रुपैयाँको स्ट्रिमिङ र ९ रुपैयाँको वाउ टिभि हेर्न सकिने छ । यसको समयाअवधी २४ घण्टाको हुनेछ ।
जीएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड–पोष्टपेड मोबाइलमा एसएमएस प्याक प्रयोग गर्न सकिने छ । यो प्याक अन्तर्गत ५ रुपैयाँमा १ दिनसम्म उपभोग गर्न पाउने गरी २० वटा एसएमएस र थप २५ प्रतिशत बोनस एसएमएस समेत उपलब्ध गराइएको छ ।
यसरी १५ रुपैयाँमा ७ दिनसम्म उपभोग गर्न पाउने गरी ७० वटा एसएमएस र ६० रुपैयाँमा २८ दिनसम्म उपभोग गर्न पाउने गरी ३०० वटा एसएमएस गर्न सकिने छ र यसमा पनि थप २५ प्रतिशत बोनस एसएमएस उपलब्ध गराइएको छ ।
नेपाल टेलिकमले एफटीटीएच अन्तर्गत ब्यक्तिगत ग्राहकका लागि विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । ब्यक्तिगत तर्फ ८ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत १ महिनाका लागि ८०० रुपैयाँ, ३ महिनाका लागि २३०० रुपैयाँ, ६ महिनाका लागि ४३०० रुपैयाँ र १ वर्षका लागि ८००० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ ।
त्यसैगरी १८ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि ४६०० रुपैयाँ, ६ महिनाका लागि ७००० रुपैयाँ र १ वर्षका लागि १२००० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ । साथै ३५ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि ५७०० रुपैयाँ, ६ महिनाका लागि ९२०० रुपैयाँ र १ वर्षका लागि १६००० रुपैयाँमा तथा ५५ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि ६३०० रुपैयाँ, ६ महिनाका लागि १०,३०० रुपैयाँ र १ वर्षका लागि १८,४०० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ ।
यस अफर अन्तर्गत कम्पनीकै नेटवर्कमा विद्यार्थीहरुले १० रुपैयाँ बराबर कल गर्न, डाटा खरिद गर्न वा एसएमएस गर्न वा यी सवै सेवा प्रयोग गर्न सक्ने छन । त्यसैगरी बाँकि ४० रुपैयाँमा ४० मिनेट कल गर्न, ६० एमबी डाटा खरिद गर्न र २० वटा एसएमएस गर्न सकिने छ । यी सबै सुविधा ३० दिन भित्र उपभोग गरिसक्नु पर्नेछ ।
साथै बोनसको रुपमा कम्पनीकै नेटवर्कमा विद्यार्थीहरुले प्रति महिना ४० मिनेट भ्वाइस कल गर्न, ६० एमबि डाटा चलाउन र २० वटा एसएमएस पठाउन सक्ने छन । यो सुविधा उपभोग गर्ने समयावधी ७ दिनको हुनेछ । प्रति महिना प्राप्त हुने उपरोक्त बोनस ६ महिनासम्म उपलब्ध हुनेछ ।
नेपालबाट भारतमा कल गर्नका लागि सस्तो दरको प्याकेज लिन सकिने भएको छ । यसका लागि कम्पनीले डेली प्याक, विक्ली प्याक र मन्थ्ली प्याक गरी तिन प्रकारको प्याक अफर ल्याएको छ । डेली प्याक अन्तर्गत ३५ रुपैयाँमा १५ मिनेट कल गर्न सकिने छ ।
सो प्याक १ दिनका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी विक्ली प्याक अन्तर्गत १५० रुपैयाँमा ६५ मिनेट र मन्थ्ली प्याक अन्तर्गत ५०० रुपैयाँमा २१५ मिनेट कल गर्न सकिने छ । यी प्याक क्रमशः ७ दिन र एक महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिने छ ।
२१. मिस्ड कल अलर्ट
विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415# मा डायल गर्नु पर्ने छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np मार्फत पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन सकिन्छ ।
पौने २ खर्ब जरीवानामा पर्यो गुगल !
एप्पलले सार्वजनिक गर्यो (Airpods), यस्ता छन् फिचर्स
के तपाई स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
सरकार प्रवक्ता भन्छन् ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरे बन्द गर्ने हो ’
ह्वाट्सएप संस्थापकले फेसबुक डिलिट गर भनेपछि…
१ महिने शिशुको जलेर मृत्यु